‘दलित’ शब्दबारे भ्रम र वास्तविकता | Kattwal.com
1. नेपालमा काठमाडौं उपत्यका, पश्चिम नेपाल र मधेसमा छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्ने क्रममा शासक जातहरुले दलित समुदायलाई हेपेर अपमानित गर्दै ‘शूद्र’, ‘अछूत’, ‘पानी अचल’, ‘थी मज्यूपि“’, ‘कुजात’, ‘पउनी’ आदि विभिन्न नाम दिए । ती अपमानजनक शब्दावली देशका विभिन्न भागमा कथित उच्च जातका सदस्यले आजसम्म पनि प्रयोग गरिरहेको भेटिन्छ ।
2. नेपालमा सामन्ती राणा शासनविरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको हाराहारीदेखि नै दलित–मुक्ति आन्दोलन पनि सङ्गठित रुपमा सुरु भयो । ००३ सालदेखि ०२३ सालसम्म दलित सङ्गठनको नाममा कहिले ‘परिगणित’, कहिले ‘अछूत’, कहिले ‘अति पिछडा’, कहिले ‘हरिजन’जस्ता शब्द दलित समुदायलाई चिनाउन प्रयोग गरिएका थिए । ०२३ सालसम्म ‘दलित’ शब्दको प्रयोग सङ्गठनको नाममा प्रयोग भइसकेको थिएन ।
3. हिन्दू समाजमा वर्णव्यवस्थाअनुसार ‘अछूत’ बनाइएका अनगिन्ती जात ९अबकतभ० लाई साझा नामका रुपमा ‘दलित’ शब्दले सम्बोधन गर्ने व्यक्ति भारतका प्रसिद्ध दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकर थिए । सन् १९२७ को वरिपरिदेखि उनको नेतृत्वमा भारतमा चलेको दलित आन्दोलनको क्रममै ‘दलित’ शब्दको प्रयोग व्यापक बनेको थियो । यसरी प्रयोग हुने क्रममा ‘दलित’ शब्द हिन्दू समाजमा विभिन्न जातीय समूहभित्रका ‘अछूत’ बनाइएका जातहरुको साझा समुदायगत नामका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो ।नेपाली र हिन्दी शब्दकोशमा ‘दलित’ शब्दको सामान्य अर्थ ‘हेपिएको, दलिएको, पिसिएको’ भन्ने रहेको छ । तर भारतीय र नेपाली दलित–मुक्ति आन्दोलनले ‘दलित’ शब्दको अर्थ अब त्यतिमा मात्र सीमित रहन दिएनन् । अब यो शब्दले हिन्दू समाजमा ‘पानी अचल’ बनाइएका जातहरुको साझा समुदायगत नामको अर्थसमेत ग्रहण गर्न पुगिसक्यो । वास्तवमा दलित कुनै जाति (caste) होइन, विभिन्न जातहरु (castes) को समुच्च समुदाय (community) मात्र हो ।
4. ‘दलित’ शब्द–प्रयोगको यस क्रम हेर्दा केही पक्ष स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । एक, ‘दलित’ नाम कुनै शासक जातले हेपेर दिएको नाम होइन, बरु यो दलित आन्दोलनबाट विकसित भएको साझा परिचय हो, साझा नाम हो । दुई, वर्णव्यवस्थाअनुसार ‘पानी अचल’ बनाइएका जात एउटै जातीय समूहभित्रका मात्रै छैनन् । यी जात आर्य–खस, मधेसी र नेवार गरी तीन वटा समुदायका छन् । त्यसैले ‘दलित’ शब्दले यी तीनै समुदायका ‘पानी अचल’ बनाइएका जातको साझा परिचय दिन सक्ने अर्थ बोकिसकेको छ । आज साझा नाम बनेको ‘दलित’ शब्दलाई प्रयोग नगर्ने हो भने यो आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? के आन्दोलन वा कस्ता जातको आन्दोलन भनेर सम्बोधन गर्ने ? त्यसका निम्ति पनि आफ्नै आन्दोलनबाट सिर्जित गर्व गर्न सकिने साझा नाम ‘दलित’ नै हुन सक्ने प्रस्ट छ ।
5. नेपाली दलित–मुक्ति आन्दोलनमा यस्ता तर्क पनि बेला–बेला कतिपयले उठाउने गरेका छन् । ‘हामीले आफूलाई दलित भन्नुहुँदैन’, ‘आफैंले आफूलाई तल किन ठान्ने ?’ यस्ता तर्कका सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो, ‘दलित’ अरुले हेपेर दिएको नाम होइन, यो दलितको गर्विलो आन्दोलनबाट स्थापित शब्द हो । दोस्रो कुरा, ‘दलित’ भन्नु आफू तल भएको स्वीकार्नु होइन, बरु आफूलाई अत्याचार गरिएको छ भन्नु हो ।तेस्रो कुरा, दलितले आफूलाई दलित बताएकै कारण अत्याचार भएको होइन, बरु अत्याचार गर्ने सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक व्यवस्था विद्यमान भएकाले अत्याचार भएको हो । कतिपयले ‘हामीले आफूलाई दलित भनिरहेपछि त सधैं यस्तै रहन्छ’ भन्ने तर्क पनि गर्ने गर्दछन्, वास्तवमा यो कुरा सत्य होइन । हाम्रै समाजका केही उदाहरणबाट पनि यो कुरा प्रस्ट हुन सक्छ । जस्तै, नेवार जातिभित्रको सायमि अथवा मानन्धर जातका मानिसलाई पहिले छुवाछूत गरिन्थ्यो । तर राणाशासनको हुकुमले मानन्धरहरुको पानी चलाइदिएपछि उनीहरु ‘अछूत’ रहेनन् । मानन्धरहरुले पहिले पनि आफूलाई मानन्धर भन्थे, अहिले पनि भन्छन् । तर त्यसले उनीहरुलाई केही फरक पारेन । मूल कुरा राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्था हो । समाजमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ भने, दलितमाथि गरिने सबै अत्याचार र शोषण समाप्त हुन्छ भने ‘दलित’ परिचय एउटा सम्मानजनक पहिचान वा सामान्य परिचय वा इतिहासको स्मरण मात्र बन्ने निश्चित छ ।
कैलालीमा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना